Ady amin'ny famotsiana omby :: Voasambotra ireo delege telo sy veterinera iray • AoRaha
Voarohirohy tamin’ny raharaha famotsiana omby tao amin’ny tsenan’omby, any Amboasary Atsimo, ny delegempanjakana avy amin’ny kaominina telo, samy ao anatin’ny distrikan’Amboasary Atsimo, tamin’ny faran’ny volana jona lasa teo. Notazonina tany amin’ ny Zandarimaria izy ireo miaraka amin’ny veterinera iray.
Nanao fisafoana an’ireo omby namidy tao amin’ny tsenan’ Amboasary Atsimo ireo zandary any an-toerana, tamin’ny 20 jona, no nahatsikaritra tsy fahatomombanana tamin’ny taratasin’omby am-polony. Samy voatonontonona nandritra ny fanadihadiana ny delege avy amin’ireo kaominina Behara, Sampoina ary Berano. Voasaringotra ihany koa ny vehivavy iray, veterinera.
Niatrika famotorana avokoa izy efatra. Matetika no voatonona amin’ny famotsiana omby halatra ireo delegempanjakana any amin’ireo faritra be omby. Izy ireo mantsy no tompon’andraikitra amin’ny fanomezana ny taratasin’omby na FIB. Io taratasy io no ahafantarana ny momba ny omby iray na ny fiaviany, na ireo tompony nifandimby.
Isan’ireo paikady entin’ny Zandarimaria manafoana ny halatr’omby ny ady atao amin’ ny dahalo ambony latabatra, toy ireo mpiasam-panjakana manome taratasy hosoka amin’ny fanadiovana ny omby halatra.
Fifidianana filohan’ny CAF :: Ho fantatra amin’ny 2021 izay hisolo ny toeran’i Ahmad